မတ်လမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပခုနှစ်တွင်ဂရိတ်နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > မတ်လမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပခုနှစ်တွင်ဂရိတ်နေရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25/01/2021)
ငါt ကိုမတ်လအတွက်ထွက်ပေါက်စီစဉ်ဖို့သိပ်နောက်ကျမယ့်, ရှေ့ဆက်၏ အီစတာအလုအယက်. ကလေးတွေနှင့်အတူ အားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်ခြင်း, ယခုချစ်ရသူနှင့်အတူ quaint ကျွန်းငယ်လေးများသို့လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်, ပထမဦးဆုံးအကြီးအပျေါမှာစတင် မိသားစုခရီးသွားစွန့်စားမှု ယခုနှစ်, ကမ္ဘာ့အများဆုံးမှော်မြို့ကြီးများအချို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်မတ်လထဲမှာအများအပြားဥရောပပွဲတော်များများထဲမှတက်ရောက်ရန်. မတ်လမှာလည်ပတ်ဖို့ဥရောပမှာကြီးကျယ်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်.
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, မတ်လကိုလည်းဥရောပမှာရှိတဲ့ပွဲတော်ရာသီ၏အချုပ်အခြာဖြစ်၏, ဒါနှင့်အတူပျော်မွေ့စေရန်အခွင့်အလမ်းများတန်ချိန်ရှိပါတယ် ဒေသခံတွေ, က Citrus-တျသှငျးခံမှာဖြစ် ပျြောပှဲသဘငျ ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့, သို့မဟုတ်အဆိုပါလန်ဒန်ကော်ဖီပွဲတော်မှာ.
မတ်လအတွက်သွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပ၌ဂရိတ်သောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? အပေါ် Read!
သူတို့ပြောသည့်အတိုင်း, သင်တန်းဒါ '' လန်ဒန်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့နေ့ကနေဆဲဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားတစ်ဦးကောင်းသောနေ့ထက် သာ. ကောင်း၏ '', လန်ဒန် မတ်လလည်ပတ်ရန်ဥရောပ၌ရှိသောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေရာများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ရမည်.
မတ်လအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ကြီးမြတ်တစ်လဖြစ်ပါသည် Kensington နန်းတော် ဥယျာဉ်, Kew ဥယျာဉ်, သို့မဟုတ်မည်သည့် လန်ဒန်ရဲ့အခြား ထိပ်ဥယျာဉ်များ, crocuses နှင့် daffodils ၏သမုဒ်မြို့တော်အနှံ့ပွင်အဖြစ်.
သင်သည်များစွာသောထိပ်တန်းသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ဆွဲဆောင်မှု, ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရတဲ့အကြံပြု ခရီးသွားဧည့်လျှော့စျေးကဒ် သို့မဟုတ်တစ် ခရီးစဉ်ဘတ်စ်ကား combo လက်မှတ်. ဤရွေ့ကားလက်မှတ်တွေနဲ့အထုပ်တတျနိုငျသ သငျသညျအခြို့သောလေးနက်သောပိုက်ဆံကယ်တင်!
ကျနော်တို့ကော်ဖီကြီးတွေပရိသတ်တွေပါပဲ. ကျနော်တို့တောင်မှအံ့သြဖွယ်အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားပါတယ် ကော်ဖီဆိုင်များ ဒီမှာ ရှေ့မှာ. ဒါကြောင့်, ဤနေရာတွင်မတ်လသွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏ဂရိတ်သောနေရာများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အကြောင်းကိုရေးသားဖို့အခြားဖြစ်ပါသည် – မတ်လထဲမှာလန်ဒန်ကော်ဖီပွဲတော်!
အဆိုပါ 2019 ဗြိတိန်ကော်ဖီအပတ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်စေပြီး 30-31 မတ်လ 2019. နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း baristas နှင့်ကော်ဖီပညာရှင်များကော်ဖီဆင်နွှဲရန်အုတ်ယာဉ်ကြောပေါ်တွင်အတူတကွလာကြ၏. ထက်ပိုပြီးရှိလိမ့်မည် 250 မှုပညာရှငျနှငျ့ကော်ဖီနှင့်အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာငျးကု, အရသာနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများ, အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, လမ်းဘေးအစားအစာ, ကော်ဖီ-based ကော့တေး, တိုက်ရိုက်လွှဂီတ, DJs, အနုပညာပြပွဲ ဒါအများကြီးပို.
ပိုမိုသိလိုခငျြနဲ့လက်မှတ်တွေရဖို့? ဤနေရာတွင်ကျော်ဦးခေါင်းကို: https://www.londoncoffeefestival.com
လီယွန်လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ
ဝလေဝလေပါတီများနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့နှစ်ပတ်လည်စိန့်သည်ဒါဝိဒ်၏နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပအတွက် join, အစားအသောက်ပွဲတော်, နှင့်ရပ်ဂ်ဘီ. 1 မတ်လ
pancakes သို့မဟုတ်အပေါ် crepes တစ်အရသာ stack သို့ Tuck ပန်ကိတ်နေ့ (Shrove အင်္ဂါနေ့) လန်ဒန်မှာ, သို့မဟုတ်တစ် pancake ပြိုင်ပွဲမှာအပေါငျးတို့သ pancake-လှန်လှောကြည့်အရေးယူဖမ်း.5မတ်လ
သင့်ရဲ့မိခင်ကိုလန်ဒန်တွင်တစ်ရက်မှထွက်ဆက်ဆံပါ မိခင်ရဲ့နေ့. သငျသညျပျော်စရာများများတွေ့ပါလိမ့်မယ် မိခင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့အမှုအရာ, နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်အပါအဝင်, မြစ် cruises, စျေးဝယ်, နှင့်ဂီတ. 31 မတ်လ
အသစ်ကဘီယာအမြည်း, ဘီယာခရီးစဉ်တက်ရောက်ရန်နှင့်အခြား cider နှင့်အတူရောနှော, ဘီယာ, ဒါပေမယ့်, နှင့်လန်ဒန်ဘီယာရက်သတ္တပတ်မှာ lager ပရိတ်သတ်တွေ. TBC အဖွဲ့
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလှေလှော်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများအားအပေါ်ယူကြည့်ဖို့ဒီလသိမ်းချန်ပီယံရှစ်သင်တန်းတစ်လျှောက်အကောင်းတစ်ဦးကြည့်ရှုရာအရပျ Secure မြစ်လူမျိုး၏ဦးခေါင်းကို မြစ်လူမျိုးနှင့်အမျိုးသမီးရှစ်ဦးခေါင်း. 16 နှင့် 30 မတ်လ
အဆိုပါအပြေးသမားကို Join သို့မဟုတ် ပြင်ပကနေစောင့်ကြည့် လန်ဒန်သမိုင်းမှတ်တိုင်များတစ်ဝက်မာရသွန် Westminster နှင့်လန်ဒန်၏စီးတီးမှတဆင့်၎င်း၏လမ်းခငျြးကအဖြစ်. 24 မတ်လ
လန်ဒန်မှာမတ်လသွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပ၌ သာ. ကွီးမွတျသောအရပ်တို့ကိုမများအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ယူ ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန် နှင့် လမ်းညွှန် လန်ဒန်မြို့ရှိအရာပေါ်မယ့်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ဇာတ်စင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖမ်း ပြဇာတ်ရုံလမ်းညွှန်.
မတ်လအတွက်သွားရောက်ဖို့ဥရောပတိုက်တွင်ဂရိတ်သောနေရာများ: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Zermatt
သငျသညျသေးဆောင်းရာသီအအေးကျော်မရတယ်ဆိုရင်, ထိုအခါ Zermatt တွင် ဆွစ်ဇာလန် နှင်းကျတှေ့ရမယ့်တော်တော်လေးကောင်းသောလောင်းဖြစ်ပါတယ်. အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုမှာ အတွက်အပန်းဖြေ ဥရောပ, အဆိုပါအမှုန့်ကိုတောင်၏အဆုံးတိုင်အောင်အများသောအားဖြင့်ကောင်းလှ၏ ဧပြီလ.
Zermatt ရဲ့အများစုအဖြစ် နှငျးလြှော ဧရိယာအထက်တွင်တည်ရှိသည် 2000 မီတာ, ဒါဟာနွေဦးပေါက်နှင်းလျှောစီးမှကြွလာသောအခါမိုဃ်းပွင့်ခြင်းမရှိပြတ်လပ်မှုရှိ. မိုဃ်းပွင့်မြို့မှာ patchy ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သို့သျောလညျး, တောင်ပေါ်သို့တက်, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်. လတ်ဆတ်တဲ့ဆီးနှင်း, နဂိုအတိုင်းပုဒ်, နှင့်ပျော်စရာအများကြီးရှိပါတယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ. အလို့ငှာ လတ်ဆတ်သောမိုဃ်းပွင့်အပြည့်အဝအလားအလာတွေ့ကြုံခံစား, နေဆဲလုံခြုံတည်းခိုနေစဉ်, အချို့သော Off-piste နှင်းလျှောစီးများအတွက်နှင်းလျှောစီးလမ်းပြငှါး.
Zermatt သာစွန့်စားမှုတစ်ခုအစာစားချင်စိတ်နှင့်အတူသူတို့အားအယူခံမပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းများလွန်းသောသူတို့အားလျော့နည်းစွန့်စားစိတ်ဝိညာဉ်အချို့ကိုအံ့သြဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်. Zermatt အတွက်လှည့်လည်ဆောင်းရာသီအတွက်အကြားဖြစ်စဉ်းစားသည် ဒေသတွင်း၌အများဆုံးသာယာလှပ. လူအပေါင်းတို့သည်တစ်မြေပုံ ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဘာ့ဂ် အဆိုပါ Zermatt ခရီးသွားလုပ်ငန်း website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးလမ်းပြဘို့မလိုပါ, အဆိုပါလမ်းကြောင်းကောင်းစွာမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်း, မြင်းထိန်း, နှင့် လုံခွုံသော.
မတ်လအတွက်သွားရောက်ဖို့ဥရောပတိုက်တွင်ဂရိတ်သောနေရာများ: အရှေ့မြောက်, ဟော်လန်
သငျသညျအပွင့်ကြည့်ဖို့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပါလျှင်, အဘယ်ကြောင့်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်မပေး? ဟော်လန်မှရထားကိုဖမ်း! ဟော်လန်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နှင်းပန်းပွင့် နှစ်စဉ်ခရီးသွားဧည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်. နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်! သငျသညျလူအစုအဝေးလက်လွတ်ရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်အဖြစ်မတ်လသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ကြီးမြတ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါက tulips သူတို့ကိုယ်သူတို့အဖြစ်သေးသည်ထင်ရှားရှိသည်ဟုမပြုစေခြင်းငှါအဓိပ်ပာ. သင်ဆဲဆီးနှင်းလူဖြူတစ်ဦးအံ့မခန်းပြပွဲခံစားနိုငျ, daffodils, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင် hyacinth. မတ်လနှင့်Aprilပြီလအကြားကွာဟမှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်. ဒါပေါ့, ရာသီဥတုအခြေအနေ တစ်နှစ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား, ဒါကြောင့်တိုင်ပင်ဖို့အကောင်းဆုံးင် နိုင်ငံ၏ဆက်ကပ်အပ်နှံ Tulip က်ဘ်ဆိုက် အပတ်စဉ်ပန်းပွင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့, အရာမတ်လထဲမှာစတင်ပါ.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးရထားသုံးပြီးသင်၏နောက်ရထားခရီးဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
မတ်လ blog post တစ်ခုတွင်သွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပ၌ကြီးသောသောနေရာများ, သငျသညျယုံကွညျ? အဘယ်ကြောင့်မယူ3မိနစ်အပေါ်တစ်ဦးရထားလက်မှတ်တှေ့ saveatrain.com. သငျသညျသွားလာရန်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါချင်ပါတယ်သောနေ့စွဲနှင့်အချိန်အတွက်ဖြည့်ပါ, သငျတို့သမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေနဲ့သင့်ရဲ့ရထားခရီးများအတွက်ပေးဆောင်နိုင်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgreat-places-europe-march%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#မတ်လ #marchtraveleurope europetravel နွေဦး trainjourney ရထားခရီးစဉ် travelholland netရာဝတီ uktravel